ရှညောသား: March 2018
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, March 20, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးချက်ပြုတ်ရတာကိုပဲ စိတ်ထဲမှာပျော်နေတာ ကျောင်းမှာဘယ်လောက်ပင်ပမ်းခဲ့ပါစေ
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, March 11, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, March 04, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အညာသားရယ် ထိုင်းတောင်ပိုင်းက ရွှေတိဂုံ ပုံတူစေတီတော်ရယ် တပေါင်းလပြည့်ရယ်
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆောင်ခလာခရိုင် ဟတ်ရိုင်က မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွင်းရှိ ရွှေတိဂုံပုံတူစေတီတော်
အဆောင်ကနေသူငယ်ချင်းသုံးယောက် သုံးဘီးကားကို အသွားအပြန်တစ်ယောက် ဘတ်(၁၀၀)ပေးပြီးငှား
တပေါင်းလပြည့်ည အဆောင်ပေါ်မှ မြင်ရသော လမင်းကြီး
လမင်းကြီးကိုငေးရင်း နွေဦးလေပြေနဲ့အတူ အဖေနဲ့အမေရှိရာဆီကိုစိတ်ကူးနဲ့လွမ်းနေမိပါတယ်။
သမျှကုသိုလ်အားလုံးကိုအမျှပေးဝေပါတယ်။အားလုံး ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, March 01, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook